Home Wararka Maxa ka soo baxay kulamadii Rooble iyo Fahad Yasin? Maxaase xigi doona?
Maxa ka soo baxay kulamadii Rooble iyo Fahad Yasin? Maxaase xigi doona?
Asbuucii u danbeeyay waxa kulamo albaabada u xiran yihiin u dhex maray Fahad Yasin iyo RW Rooble. Kulamadaan oo intooda badan dhacayay xili danbe habeenkii, ayuu ay ka dhacaayeen guriga uu Rooble ka degan yahay aaga madaxtooyada.
Kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ku koobnaa Rooble, Fahad iyo iayada ooo mararka qaar uu qayb ka noqonayay wasiirka Wasaraadda waxbarashada Carab. Inkastoo aan ayan MOL soo gaarin xog rasmi ah oo la xiriira qodobada looga hadlayay kulamada labada nin dhexmaray hadana waxaa la qiyaasayaa in kulamadaas ay salka ku hayeen sidii Rooble uu qayb buuxda ugu noqon llahaa xeendaabka siyaasada Madaxweyne Farmaajo.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay MOL ay ilo lagu kalsoon yahay u sheegayeen, dowlada Qatar ay ku qancisay RW Rooble in uu diirada saaro danihiisa gaar ah Kanata tanaasulo danaha guud ee uu waqtiga badan galiyay. Gaar ahaan waxaa lagu qanciyay in uu gabi ahaanba ku shaqeeyo awaamiirta Fahad Yasin iyo Farmaajo. Dowlada ayaa qoysikiisa dejisay madagaalada Doha iyda oo mas’ruufkiisa ay bixiso dowladaas.
Rooble ayaa dhankiisa waxaa loo balan qaaday in la siiyo lacag isla markaana loo fasaxo in uu xilial u magacaao saaxibo isaga u gaar ah, gaar ahaan in uu geeyo saaxibadiisa ilaha uu ku tuhmayo in uu dhaqaale ka heli karo.
Waxa uu horay u magacaabay Madaxa hay’dda Jinsiyadaha oo laga soo ururiyo lacago aad u badan kana madax banaan wasaaradda Maaliyada. Waxaa sidoo kale uu magacaabay madaxa furdada oo iyadana ah meel dhaqale badan uu ka heli doono. Wasiirkiisa Amniga uu dhawaan magacaabay ayaa asbuucaan dhankiisa ka bilaabay in uu iibiyo ruqsadaha –Leysanka shirkada amniga ee shisheeyaha.
Dhanka kale waxaa dhawaan dhul guud ee dowlada lahayd la siyay qaarkamida wasiirada ka soo jiida beshiisa. Rooble ayaa ku soo dhamaaday dhaqaale aruurusi. Fahad Yasin ayaa caan ku ah in uu iibsado shaqsiyaadka u nuqul musuqmaasuqa ama baahi dhaqaale haysata.
Cabdi qaybdiid oo ah lataliyaha gaarka ah ee RW Rooble ayaa yiri “Adeer waan u sheegnay Rooble wixii loo sheegi lahaa, waqti ma haysatid aayaan ku iri, Hawiye-na abaal ma laha… wixii aad qabso karto qabso hada inta ay goori goor tahay, wixii aad jaf-jafan karto jafo jafo.. ninka caloosha buuran (Fahad) isaga ayaa dalka xakumee la shaqeeyso.. walaahaan fursada noocaan oo kale ah ayan maalin kale ku soo mari doonin.. hadii kale waxaad noqonaysaa sidii RW Saacid iyo Cabdiwali Shiikh oo hawada ka baxay cid ku xasuusata qadiyadna ma jirto”